“သမ္မတအစ ဝန်ကြီးချုပ်အဆုံး ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်လများ ကျခဲ့ဘူးကြပေမဲ့ ဘယ်မူးယစ်ရာဇာ မှ ထောင်ကျခံရခြင်း မရှိဖူးတဲ့တိုင်းပြည် – စွယ်စုံသုတ
“သမ္မတအစ ဝန်ကြီးချုပ်အဆုံး ထောင်ဒဏ် နှစ်ရှည်လများ ကျခဲ့ဘူးကြပေမဲ့ ဘယ်မူးယစ်ရာဇာ မှ ထောင်ကျခံရခြင်း မရှိဖူးတဲ့တိုင်းပြည်
ဒီနိုင်ငံမှာ သမ္မတအစ ဝန်ကြီးချုပ်အဆုံး ထောင်ဒဏ် ညနှစ်ရှည်လများ ကျခဲ့ဘူးကြပေမဲ့ ဘယ်မူးယစ်ရာဇာ မှ ထောင်ကျခံရခြင်း မရှိဘူးတဲ့တိုင်းပြည် 😏
အင်္ဂလိပ်ကို စစ်ရှုံးလို့ စစ်လျော်ကြေးငွေ တစ်ကုဋေ လောက်လေးပေးရတာကို သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာ ပုံကြီးချဲ့ပီးဖော်ပြတတ်ကြပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာ ကိုယ်ပြန်ခိုးတဲ့ သူတွေရဲ့ ငွေဘယ်လောက်များများ မှတ်တမ်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည် ☹️
ဘုံဘေဘားမားကုမ္မဏီက သစ်လုံးရေငါးသောင်း ခုတ်တာလောက်ကို သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲထည့်ပီး သင်ခန်းစာလုပ်ပြကြပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောဧရိယာရဲ့ ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ခုတ်ပစ်တဲ့သူတွေ သစ်တောပါရဂူဘွဲ့ယူတာကို အပြစ်လို့မမြင်တတ်တဲ့ မျက်ကန်းတွေ ရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်
ဒီနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ် ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ် ဖိနပ်စီးပီး တက်တဲ့သမိုင်းကိုသာ ပုံကြီးချဲ့ပီး ယနေ့အချိန်ထိပြောနေတတ်ကြပေမဲ့ မြန်မာ့စစ်ခေါင်းဆောင်အချို့ ဘုရားပေါ် ဖိနပ်စီးပီးတက်တာ ဖိနပ်စီးပီး ဘုရား ထီးတော်တင်တဲ့ သမ္မတမျိုးတွေကို မည်သည့် ဘာသာရေးသမားမှ အပြစ်မပြောရဲတဲ့တိုင်းပြည်
အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြကြရင်း နံပါတ်တုတ်နဲ့ အရိုက်ခံရလို့ သေသွားတဲ့သူမျိုး ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူမျိုးတွေအကြောင်း ပုံကြီးချဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲ ထည့်သင်ခဲ့ကြပေမဲ့
လွတ်လပ်ရေးရပီး ကိုယ့်အချင်းချင်း အုပ်ချုပ်ချိန် အစိုးရကိုမကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြကျောင်းသားတွေကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့တာကို လူဦးရေအတိအကျ မဖော်ပြရဲဘဲ သမိုင်းမှတ်တမ်း မတင်ရဲတဲ့တိုင်းပြည် 😭
ဒီနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ် ဂျပန် ကိုလိုနီပြုစဉ်ကတောင် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အတွင်း တိုင်းတစ်ပါးသား သတ်လို့သေတဲ့မသာအရေအတွက်ကို အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေးရပီး နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်အတွင်းအချင်းချင်း သတ်လို့ သေတဲ့မသာ အရေအတွက်က ပိုပီးများနေတာကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်
အင်္ဂလိပ် လက်ထက် အကြွေးမပေးနိုင်လို့ ချစ်တီး လယ်သိမ်း ယာသိမ်း သမီးသိမ်းတာကို ပုံကြီးချဲ့စာဖွဲ့တတ်ကြပေမဲ့ အချင်းချင်း လယ်သိမ်း ယာသိမ်း သမီးတွေပျော်တော်ဆက်ခံရတာကို ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောရဲတဲ့တိုင်းပြည် 😤
ဒီနိုင်ငံမှာ အရက်ပုန်းရောင်းတာလောက်ကိုမိရင် ချက်ချင်း ဖျက်ဆီးပစ်တတ်ကြပေမဲ့ ပိုင်ရှင်မဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို တွေ့တဲ့နေရာမှာ ဘယ်တော့မှမဖျက်ဆီးဘဲ မည်သို့မည်ပုံလုပ်သည်ကို ပြည်သူကိုချက်ချင်း ချမပြရဲတဲ့တိုင်းပြည် 🥺
ဒီနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန် အုပ်ချုပ်စဉ် ကိုလိုနီစနစ် ဖက်စစ်စနစ်လို့ ပုံကြီးချဲ့ ခဲ့ကြပေမဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား တစ်စုက တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို လုပ်ချင်သလိုလုပ် နောက်ကြောင်အရေးမယူရဆိုတဲ့ ဥပဒေကိုထုတ် ကိုလိုနီဖက်စစ်တို့ထက် ဆိုးသွမ်းခဲ့တဲ့သူတွေကို ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ ထင်တဲ့သောက်ပိန်းတွေ အရမ်းပေါတဲ့တိုင်းပြည် 😓
ဒီနိုင်ငံမှာ ဆောင်ပုဒ်တွေ အမိန့်နဲ့ ညွန်ကြားချက်တွေ ထုတ်ချင်သလောက်ထုတ် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဘာတစ်ခုမှ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်တဲ့သူတွေက တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူကို အရမ်းချစ်တဲ့သူတွေပါဆိုတဲ့ ဂျင်းကို အတောင့်လိုက်မြိုသူတွေ ပေါတဲ့တိုင်းပြည် 🤐
Credit. Photo crd
“အင်းစိန် ထောင်မှာ တိုက်ပိတ်ခံရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက်ထိ အခြေအနေ ဆိုးရွားလဲ. . . ဖတ်ကြည့်ပါ”
နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မိခင် ဖြစ်သူ အ တွက် မုန့်ဖက် ထုပ် ရောင်းပြီး ရှာကျွေးနေတဲ့ (၁၁)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်